12 codsi si loo abuuro loona wadaago GIF-yada iPhone-kayga | Wararka IPhone
Codsiyada 12 si loo abuuro loona wadaago GIF-yada iPhone-keena
In muddo ah hadda faylasha GIF waxay noqdeen bedel kufiican muujinta shucuurtayada halkii emoticons. Waqtigan xaadirka ah App Store waxaan ka heli karnaa tiro badan oo codsiyo ah oo noo oggolaanaya inaan abuurno, raadinno oo wadaagno faylasha GIF asxaabteena iyo kuwa aan naqaanno.
Halkan waxaan ku tusaynaa, Codsiyada 12 si loo abuuro loona wadaago GIF-yada si toos ah iPhone-keena adigoon maciinsan codsiyada desktop-ka. Qaar ka mid ah kuwa loo heli karo soo degsasho bilaash ah, waxay leeyihiin wax ku iibsasho gudaha ah, in kastoo aysan kulligood ahayn, si ay u awoodaan inay u habeeyaan animationskeena kahor intaan iyaga lala wadaagin
1 Codsiyada si loo abuuro loona wadaago GIFs
1.1 GAMKA GIPHY
1.9 Kiiboodhka GIF
Codsiyada si loo abuuro loona wadaago GIFs
Miyaad dareemaysaa hal abuur? Iyada oo GIPHY CAM waad awoodaaKudar miirayaasha qaar ama saameyn gaar ah si loo habeeyo animations-kaaga ka hor inta aan la wadaagin.
GIFO waxay na siisaa hab fudud oo dhakhso leh oo lagu sameeyo GIFs firfircoon, oo ay ku jiraan memes si fudud iyadoo la isticmaalayo kamaradda iPhone-ka. Marka la abuuro waxaan kula wadaagi karnaa Instagram, Vine, Twitter, Tumblr, iMessage, Whatsapp ...
Waxay leedahay in-app iibsadaan.
Iyadoo la adeegsanayo Jittergram Abuur 3D GIF animated ama animations mahadnaqa shaqada hyperlapse, sidoo kale waxaa laga heli karaa kamaradda iPhone-keena.
vhoto wuxuu noo ogolaanayaa inaan u beddelno fiidiyowyada lagu duubay aaladdayada faylasha GIF, iyo sidoo kale sawirro. vhoto wuxuu noo ogolaanayaa inaan sawirada ama fiidiyowyada u soo goosano awood u yeesho inuu abuuro wareeg wanaagsan si aan hadhow ugu wadaagno Tumlr, Instagram, Facebook, Twitter ...
PHHHOTO marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan abuurno GIFs firfircoon waxay noo ogolaaneysaa inaan bulshada la wadaagno dhammaan waxyaabaha aan abuurno, halkaas oo dadka isticmaala ay doortaan kuwa ugu fiican. Waxay leedahay dhowr hab oo lagu waafajiyo dhammaan baahiyaha isticmaalaha.
Xaqiiqdii magacan kubbadaha caanka ah ee kirismaska ​​ee wejiyada asxaabtaada ayaa kugu dhawaaqi doona adiga. Codsigani wuxuu noo ogolaanayaa inaan sameyno GIF-yada firfircoon adoo adeegsanaya kaliya wajiyada saaxiibadeena si aad hadhow ugu wadaagto Twitter, Facebook, emayl ama Google +.
GIF GIF GIF waa kumbuyuutar noo oggolaanaya inaan soo uruurinno faylasha GIF ee aan mar dambe helno si fudud ugu wadaagaan adoo adeegsanaya kumbuyuutarka ee shabakadaha bulshada ee kala duwan.
Ku darista saamaynta sawirradeenna iyo fiidiyowyadeenna waa mid aad u fudud codsigan. Waxaan u habeyn karnaa saameynteena beddelidda mugdiga, cabbirka iyo xitaa ku dar shaandho si loogu daro hal dhibic hal-abuur. Codsigu wuxuu na siiyaa in ka badan 200 oo saameyn oo gif ah si aan ugu dabbaqno sawirradeena iyo fiidiyowyadeena iyo in ka badan 75 waji si loo habeeyo saamaynta.
Si ka duwan barnaamijyada kale, GIF Keyboard wuxuu noo oggolaanayaa inaan keydinno oo hadhow wadaagno faylasha GIF ee uu dalabku na siiyo. Codsiga ayaa na siinaya qaybaha kala duwan si aan u helno midka ku habboon baahiyahayaga xilliyada yar.
Legend wuxuu noo ogolaanayaa inaan qoraalka ugu rogo animations cajiib ah. Mid walboo animations ah oo laga heli karo arjiga waxaa loogu talagalay animators xirfad leh waxayna na siinayaan boqolaal isku dhafan oo noocyo kala duwan ah, animations, backgrounds iyo midabyo aan ku tijaabinno.
getGIG waa maktabad kale oo ah faylasha GIF taas oo noo ogolaaneysa inaan hubino markasta waa maxay isbeddellada hadda socda iyadoo loo marayo sumado kala duwan oo aan isticmaali karno halkii aan ka adeegsan lahayn qaybaha kala duwan. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku daro widget Xarunta ogeysiinta si aan u aragno taas oo ah GIF ugu caansan xilligan.
Iyada oo leh 6 qaabab kala duwan oo tafatir ah, mahadnaqa Kanvas waxaan noqon doonnaa halyeey hal abuur leh waxaana awood u yeelan doonnaa sameynta GIF-yada farshaxanka, fiidiyowyo waqti-dhaaf ah, fiidiyoowyo gaabis ah oo dhaqdhaqaaqyo ah, Waxaan ku sawirayaa dhammaantood dhowr ilbiriqsi gudahood. Markaan sameysano halabuurkeena waxaan kuwadaagi karnaa Instagram, Tumblr, Twitter, Facebook, YouTube, iMessage iyo emayl.
Xilligan qaar badan ayaa jira codsiyada fariimaha degdega ah ee noo ogolaanaya inaan wadaagno faylasha GIF Wadahadalladeenna, marka laga reebo Ilaaha Qaadirka ah, barnaamijka ugu isticmaalka badan adduunka laakiin aan weli wax taageero ah ka helin noocyada faylasha ah.
In kastoo App Store-ka aan ka heli karno tiro badan oo codsiyo ah oo noo oggolaanaya inaan abuurno noocyada feylasha ee dhaqdhaqaaqa, maahan dhammaan kuwa ku jira liiskan. Maxay yihiin barnaamijyada aad u adeegsato abuurista iyo wadaagista GIF-yadaada? Noo soo dir codsiyada aad u adeegsato si aad u abuurto ugana wadaagaan shabakadaha bulshada, codsiyada farriimaha ...
Isticmaalayaal badan, bilawga inay abuuraan faylasha GIF waxay noqon kartaa hawl cabsi leh ama dhib badan, ama si fudud waqti uma haystaan. Xitaa sidaas, haddii aad rabto inaad la wadaagto asxaabtaada faylasha noocan ah, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa inaad ka faa'iideysato codsiyada noo oggolaanaya inaan ka raadinno faylasha GIF tirada maktabadaha badan ee laga heli karo internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Codsiyada 12 si loo abuuro loona wadaago GIF-yada iPhone-keena
Pangu waxay sii deyneysaa nooca Ingiriisiga ee JAILBREAK ee iOS 9.2-9.3.3 laakiin ...